Guddiga Amniga ee golaha wakiillada Puntland oo wasiirka amniga ku eedeeyay musuq-maasuq iyo sharci jebin – Kalfadhi
Guddiga Amniga ee golaha wakiillada Puntland oo wasiirka amniga ku eedeeyay musuq-maasuq iyo sharci jebin
Golaha wakiillada Puntland oo ku guda-jira hawlaha kalfadhiga 44raad ee u furmay toddobaadkan ayaa maanta yeeshay kulankoodii saddexaad, kaas oo war-bixin lagaga dhegaystay guddiga amniga iyo nabadgelyadda.
Gen. Cabdicasiis Siciid Gacameey guddoomiyaha guddiga ayaa warbixin ka hor akhriyay fadhiga golaha. Warbixintaas oo ay ku dhalileen hawl socodka wasaaradda amniga iyo hubka dhigista Puntland. Qoraalka oo loo qaybiyay golaha waxaa lagu sheegay in wasiirka amnigu uu ka gaabiyay inuu la shaqeeyo guddiga.
“Wasiirka wasaaradda amnigu wuxuu ka baaqsaday wada-shaqayntii dastuuriga ahayd ee golaha wakiillada kala dhexaysay, wuxuuna jebiyay qodobada 59aad iyo 64.1aad ee Dastuurka Puntland, mana jirto wax warbixin ah oo ay golaha u soo gudbiyeen” ayaa lagu yiri warbixinta.
Warbixinta golaha guddiga amniga iyo nabadgelyadu waxay sidoo kale wasaaradda amniga ku eedaysay in ay qaaddo lacago aan waafaqsanayn nidaamka maaliyadeed ee Puntland, kuwaas oo ay ka mid yihiin lacagta dal-ku-galka oo $25 iyo lacagta ruqsadda dal-ku-jooga shaqaalaha ajinebiga ah ee shaqooyinka joogtada ah oo dhan $100, waxayna ku go’aan warqad lacag qabasho la’aan ah, sida lagu sheegay warbixinta.
Waaxda hub ka dhigista ee wasaaradda ayaa guddigu sheegay in ay gebi ahaanba hawlgal tahay, waaxdaas oo muhiim u ah amniga guud ee Puntland, sida warbixintu tilmaamayso.
Ugu dambayntii, waxay guddigu ku eedeeyeen wasiirka inuu sifo sharci-darro ah ku ciidameeyay kuna hubeeyay rag dhalinyaro da’yar ah oo arday ah, waxaana arrintaas ka dhashay amni xumo gobolka Bari ku soo korortay, maadama aanay qabin wax tababar ah lana rabay in laga dhigo qarsoonayaal oo keliya.
Gudoonka golaha wakiillada ayaa xiritaankii kalfadhiga 43aad wuxuu kula dardaarmay guddiyada golaha in ay si masuuliyad iyo metelaad dhab ahi ku jirto ay ula xisaabtamaan hay’adaha kala duwan ee dowladda ee ay la xisaabtanka ku leeyihiin, si loola xisaabtamo hay’adaha dowladda ee nidaamka baal-maraya.